Asa any Koweit Tratra ireo mpivady mpanondran’olona
Lehilahy sy vehivavy iray mpivady no tratran’ny polisy avy ao amin’ny Service des Enquêtes Spécialisés ny 15 jolay
Fikasana hamono ny Filoha Kaomorianina Voasambotra tany Mahajanga i Bouboucha
Teratany Kaomorianina iray avy atsy amin’ny Nosy Anjouan antsoina hoe Isa Mohamed fantatra amin’ny anaram-bositra « Bouboucha »
Jean Eric Rakotoarisoa “Aza maika ny hamangy sy hiandry faty…”
Mitandrema, hoy ny hafatry ny filohan’ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana, Jean Eric Rakotoarisoa, manoloana ny zava-misy mikasika ny fipariahan’ny valanaretina Coronavirus eto amin’ny firenena.
Afo be teny Antaninarenina Kila forehitra ny ONE sy ny Paositra
Nirehitra omaly hariva ny Ofisim-pirenena momba ny tontolo iainana na ny ONE eny Antaninarenina.
Misaona ny fanaovan-gazety Nodimandry i Tahiana Andrianarimanana
Nodimandry teo amin’ny faha 35 taonany omaly ny namana mpanao gazety eo anivon’ny Onjampeo Feon’Imerina, Hariniaina Tahiana Andrianarimanana na Tahiana Andrianarimanana.
Mba ho fitsinjovana ny rehetra Sao tokony hahena ny vidin-jiro sy vidin-tsolika ?
Ny vesatra zakain’ny isan-tokantano sy ny vidim-piainana mihitsy no tokony hahena amin’izao fotoam-pahasahiranana iainan’ny vahoaka izao.
Hatrany amin’ny 27 ny sakana amin'ny RN9 izay andoavana 2 000 Ariary ka hatramin'ny 10 000 Ariary isaky ny fiara sy isaky ny sakana, fa raha tsy izany dia tsy sokafan’ireo andian’olona manao barazy ireo ny lalana. Dimy lahy tamin’ireo mpanaoraraotra sy mpitaky vola tsy ara-drariny no tratra ambodiomby ka nosamborina, raha toa ka tafaporitsakakosa ny naman’izy ireo. Nifanome tànana ka nahazoana izany vokatra izany moa ny Ofisin’ny fizahantany sy ny foibem-paritry ny fizahantany any Menabe ary ny Zandarimariam-pirenena taorian’ny fihaonan’ny “Organe Mixte de Conception” na ny OMC.